Akhri: Siilaanyo oo ku gacanseyray casumaad uu ka helay madaxweyne Xasan Sheekh – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Akhri: Siilaanyo oo ku gacanseyray casumaad uu ka helay madaxweyne Xasan Sheekh
4th November 2014 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo, ayaa sheegay inuu diiday martiqaad uu u soo diray madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekhgh Max’ud si uu uga qeybgalo shirka Soomaaliya loogu qabanayo magaalada Copenhagen ee dalka Denmark.
“Waxa aan martiqaad ka helay madaxweynaha Soomaaliya si aan uga qaybgalo kulan heerkiisu sareeyo oo Soomaaliya loo qabanayo bishan aynu ku jiro, waxaanan jaarkayaga u rajaynayaa wanaag, laakiin shirkan la igu martiqaaday waa mid u gaar ah Soomaaliya, mana khuseeyo Somaliland, waxaanna la oghayahay in Somaliland tahay dal gaar ah, shirka lagu qabanayo magaalada Copenhagen ee dalka Dermark waxa uu khuseeya ajandayaasha arrimaha fedaraalka Soomaaliya, kuwaasina maaha qaar khuseeya Somaliland,” ayuu yiri madaxweyne Siilaanyo oo khudbad ka jeediyay Kulan Deeq bixiyeyaasha iyo Somaliland Hargeysa uga furmay.
Madaxweyne Siilaanyo waxa uu sidoo kale ka hadlay Wada hadalada u socday Somaliland iyo Somalia, isagoo beesha caalamka ka codsaday in la dhawro Heshiisyada ka soo baxa wada xaajoodka.
“Wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya waxa si deeqsinimo ah u wada dalka Turkiga, waxaannu jecelnahay in midho-dhal fiican ka soo baxaan shirka wadahadalka, waxaanan beesha caalamka ka doonaynaa inay taageeraan sidii loo dammaanad qaadi lahaa in dhinacyada loogula xisaabtami lahaa fulinta qodobada iyo heshiiska ka soo baxay wadahadalka” ayuu yiri Siilaanyo.
“Somaliland waxa ka go’an ilaalinta iyo ka qaybgaadashada nabadgelyada, ammaanka gobolka Geeska Afrika, iyo inay qiimo weyn u hayso soo wadida wadahadalka Soomaaliya si ay u muujiso inay dal muxtaran ah ku dhex noqoto bulshada caalamka.” ayuu sidoo kale yiri Axmed Siilaanyo.
Dowladda Denmarka ayaa marti gelineysa shir looga hadlayo arrimaha Soomaaliya, iyadoo waqtigiisu soo dhawaaday ay is khilaafeen madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh iyo R/wasaare Cabdweli Sheekh.
Xarruntii Ganacsiga Aduunka oo 13 sano kadib la howlgeliyey